Andro: 25 Oktobra 2019
Kardemir R & D Centre nomen'ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknolojia
KARDEMİR dia nanampy ny R&D Center vaovao ho an'ny Tiorka Sector Steel. KARDEMİR R&D Center, izay naorin'ny Birao KARDEMİR tamin'ny Aprily 15 [More ...]
Ny Mevlana Junction dia hikatona amin'ny fifamoivoizana noho ny asan'ny TÜPRAŞ Hamsu Line. Tao anatin'ny haavon'ny fandalinana, lalana iray natao voafetra ho an'ny fiara fitateram-bahoaka tsy miankina sy ho an'ny daholobe mba hisorohana ny olana ho an'ny olom-pirenena. ANDRIAMANITRA DAY 4 ANDRO HANOMPOANA TÜPRAŞ Hamsu [More ...]
Nanomboka ny fanandramana Lakes Express
Nanomboka ny fanandramana Lakes Express: tonga ny Minisitra Turhan, ny gara Isparta tamin'ny vanimpotoana voalohany nataon'i Isparta-Izmir tamin'ny vanim-potoana fanondranana Isparta-Izmir voalohany, ny hatsaran'ny Isparta miaraka amin'ny firenena sy izao tontolo izao, hampiakatra ny lanjan'ny tanàna, ny tanàna [More ...]
"Ao Azia Afovoany Railway Summit" voalohany 21-24 Oktobra 2019 daty ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD), nampiantrano lalamby Fikambanana Iraniana, Kazakhstan lalamby, Ozbekistan lalamby ary natao tao Ankara ny fandraisana anjaran'ireo solontenan'ny Turkmenistan lalamby. [More ...]
Fiara 141 an-tapitrisany 350 an'arivony no nampiasa an'ireny lalan-kombana ireny
Ny kanto tetezana 6, notarihin'ny kaominin'i Denizli Metropolitan, dia nampiasa fiara 141 tapitrisa 350 arivo amin'izao fotoana izao. Afaka mamonjy tahiry solika an-tapitrisany taonina miaraka amin'ny famatsiam-bola fitaterana goavana any Denizli ny olompirenena [More ...]
15 volana Jolay Democracy Bus Station Fanadihadiana asa
15 Jolay Station Bus Democracy (Greater Bus Istanbul) Munisipaly Metropolitan Istanbul (IMM) dia mitondra fanapotehana sy fanadiovana trano nafoina sy mampidi-doza. 15 fiantsonan'ny bus an'ny demokrasia tamin'ny volana Jolay (tobin'ny fiara fitateram-bahoaka lehibe Istanbul) [More ...]
Gaziray% 99 Vita
Mitohy ny asa eny amin'ny metro, izay kasaina ampiharina mba hamahana ny olan'ny fitaterana, izay iray amin'ireo olana goavana indrindra an'ny Gaziantep. Mikaroka loharano ho an'ny tetikasan'ny metro, izay hanomboka amin'ny Hopitaly City ary hiitatra hatrany amin'ny Station Square. [More ...]
Miitatra hatrany amin'ny Karacabey sy Bandırma ny fiaran-dalamby amin'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ..!
Tamin'ny vanim-potoana vao haingana; Raha nanohy nivoatra haingana i Karacabey niaraka tamin'ny fampandrosoana ara-tsosialy, ara-kolontsaina ary ara-toekarena, dia nisy ny fampiasam-bola vaovao hitondra fanampiana betsaka ho an'ny distrika. Ben'ny tanànan'ny Karacabey [More ...]
Van dia niandry modely vaovao amin'ny fitaterana sy ny fitateram-bahoaka mandritra ny taona maro. Indrindra tamin'ny taon-dasa, ny tetikasa hamorona fomba fijery lehibe izay momba ny tram [More ...]
Ny solombavambahoaka AK Party Aydin Metin Yavuz, izay toerana lehibe amin'ny fandaharam-potoana mandritra ny fotoana kelikely ao amin'ny Aydin 'Double Line Railway Project' dia hotanterahina mifandraika amin'ny 2020, hoy izy. Tetikasa tetikasa Double Track Railway ao Aydın [More ...]
Fatih Dönmez, minisitry ny angovo sy ny harena voajanahary, nitsidika TÜVASAŞ izay niseho tamin'ny fifaninanana R & D & Innovation Summit. TÜVASAŞ Mpiandraikitra ankapobeny Dr. İlhan Kocaarslan eo amin'ny toeran'ny minisitra Fatih Dönmez [More ...]
Ny fitsapan-kevitry ny minisitry ny indostria sy ny teknolojia Hasan Büyükdede dia nitsidika ny talen'ny Aber İzzet Baysal University Rector Prof. Mustafa Alişarlı sy ny TÜVASAŞ Andriamatoa sy Tale Jeneralin'ny Profesora Dr. hanlhan Kocaarslan ao amin'ny biraony. Ny minisitra lefitra, ny jeneraly [More ...]
Fampivoarana fiaran-dalamby: Haydarpaşa 'Fampirantiana sary
Fampirantiana sary nataon'i Hatice Ezgi Özçelik Tren No Fiaran-dalamby: Miandry mpitsidika i Kadıköy Manişo Cultural Center eo anelanelan'ny Oktobra sy 26 Novambra. Haydarpaşa Railway Station, lova ara-kolontsaina ao Kadıköy [More ...]
Ny vidin'ny fitainganana ny metrobus, izay iray amin'ireo fiara fitateram-bahoaka be mpampiasa indrindra any Istanbul, dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra. Misy ny saran-dàlana samihafa amin'ny metrobus izay manome fitaterana avy any Beylikdüzü mankany Söğütlüçeşme. [More ...]
Sahin, maika hahita vahaolana amin'ny olana!
Ny ben'ny tanànan'i Gaziantep Metropolitan Fatma Sahin, distrikan'i Sahinbey Cemal Gursel manodidina ny fitsidihana an'i Turan Emeksiz. Mihaino ny fitarainan'ny olom-pirenena i Sahin, ny manodidina an'i Turan Emeksiz eny amin'ny vahoaka eny an-tsena [More ...]
Smart City Plan Application ny Konya Metropolitan Munisipaly
Union ny kaominina ny Turkey (TBB) sy ny National Smart City Planning, Fanatanterahana ho Modely Smart Strategy sy Action Plan Hitantsika tao amin'ny "Smart Cities" fihaonambe natao. Voalamina ao Ankara sy kaominina monopolis, kaominina monisipaly [More ...]
Ny masoivohon'i Bursa Metropolitan, ny fifamoivoizana isan'andro dia mbola mihoatra ny tetezana 15 Jolay Martyrs Jolay any Istanbul, Acemler Junction, dingana voalohany amin'ny fandalinana ny lalana mampitohy mankany amin'ny sehatra vita. Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Alinur [More ...]
Voatanisa miaraka amin'ny fakantsary ny morontsiraka any Istanbul
Istanbul Metropolitan Munisipaly dia mijery ny morontsiraka rehetra any Istanbul miaraka amin'ny fakantsary manomboka any Karaburun ka mankany Kilyos. Esorina avy hatrany ny loto hita. Ny fisafoana 7 / 24 sy ny fanadiovana dia tanterahina ihany koa eo amin'ny ranomasina ranomasina, izay ivelan'ny morontsiraka. Ao amin'ny taona 2019 [More ...]